पहिलो बच्चा जन्माउनेमध्ये आधा प्रसूतिलाई शल्यक्रिया किन गरिन्छ ? जान्नुहोस् ! - Sabal Post
पहिलो बच्चा जन्माउनेमध्ये आधा प्रसूतिलाई शल्यक्रिया किन गरिन्छ ? जान्नुहोस् !
सियोल – दक्षिण कोरियामा पहिलो बच्चा जन्माउने कुल महिलामध्ये आधाले शल्यक्रिया मार्फत् बच्चा जन्माउने गरेको पाइएको छ । आइतबार सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१७ मा शल्यक्रिया मार्फत् बच्चा जन्माउने महिलाको संख्या करिब आधा पुगेको हो । स्वास्थ्य बिमा पुनरावलोकन तथा मूल्याङ्कन सेवाका अनुसार सन् २०१७ मा बच्चा जन्माएका मध्ये ४८।८ प्रतिशतले पहिलो बच्चा जन्माउँदा शल्यक्रिया गरेका छन् ।
सो संख्या सन् २०१६ मा भन्दा ३.४ प्रतिशतले बढी हो । सन् २०१६ मा शल्यक्रिया गरेर पहिलो बच्चा जन्माउने महिलाको संख्या ४५.४ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । कोरियाली समाजमा बढी उमेर भएपछि मात्रै पहिलो पटक गर्भवती हुने प्रचलन बढ्दै गएकाले स्वास्थ्य जटिलताका कारण पहिलो बच्चा जन्माउँदा शल्यक्रिया गर्नु परेको सर्वेक्षणकर्ताहरुको भनाइ छ । कोरियामा पछिल्ला वर्षहरुमा पहिलो पटक गर्भवती हुने महिलाको उमेर बढ्दै गएको पाइएको छ ।
सर्वेक्षणका अनुसार करिब ३५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेरमा पहिलो पटक गर्भवती हुने महिलाहरुको संख्या करिब २९ प्रतिशत रहेको छ । सन् २००६ मा भने यो संख्या १४ प्रतिशतको हाराहारी थियो । सर्वेक्षणकर्ताहरुले सन् २००६ मा ३५ वर्षको आसपासमा गर्भवती हुनेमध्ये ७ प्रतिशत पहिलो पटक गर्भवती भएका महिला रहेको जनाएका छन् । हरेक वर्ष गर्भवती हुने उमेर बढ्दै गइरहेको पाइएको छ । रासस/योनहाप
एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स बुटवल शाखाद्धारा विमा रकम…
त्रिकोणात्मक टीट्वेन्टी क्रिकेट शृंखलाअन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपालकोजीत
पत्रकार राज चौधरीमाथि भएको आक्रमणप्रति फोनिज रुपन्देहीको…
नौमती पन्चेबाजा तालिम सम्पन्न
शिक्षा क्षेत्र सुधारमा नैराश्यता
आफैले फर्काइएका झा लाई किन दियो सरकारले…